VDK PAY Apk Download Ho an'ny Android [2022 E-Wallet] | APKOLL
VDK PAY Apk Download ho an'ny Android [2022 E-Wallet]
Ny famerenana amin'ny laoniny finday dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'izao fotoana izao. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny rindranasa Android ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny anarana hoe VDK PAY. Izy io dia rindranasa Android, izay manolotra ny famerenana ny tambajotra finday. Izy io koa dia manome fonosana isan-karazany isaky ny recharge.
Ny finday dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra amin'ny fifandraisana, fa ny tambajotra dia singa manan-danja amin'ny Mobile. Raha tsy misy tambajotra dia boaty fotsiny ny findainao, tsy afaka mifandray amin'olona ianao. Noho izany, ny iray amin'ireo ampahany lehibe amin'ny Smartphone dia ny tambajotra. Noho izany, raha hampiasa ny serivisy rehetra amin'ny tambajotra, ny mpampiasa dia tsy maintsy mamerina ny kaontiny.
Misy fomba maro, izay ahafahan'ny mpampiasa mamerina ny tambajotra data. Misy mpivarotra ambongadiny samy hafa misy, azon'ny mpampiasa atao ny mandoa azy ireo amin'ny famerenam-bola. Ny safidy faharoa dia amin'ny alàlan'ny karatra, misy karatra samihafa misy eny an-tsena hividianana kaonty. Ny fomba fahatelo dia amin'ny alàlan'ny fampiharana recharging ofisialy.
Ny tambajotram-pifandraisana isan-karazany dia manolotra rindranasa, izay ahafahan'ireo mpampiasa an'io tambajotra io mameno ny tambajotrany amin'ny alàlan'ny fampiharana Android. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny fampiharana iray, izay manolotra famandrihana mora foana ny tambajotram-pifandraisana rehetra. Izy io koa dia manome tolotra samihafa, izay hozarainay aminareo rehetra. Noho izany, mijanòna miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy ary diniho miaraka aminay izany.
Topimaso momba ny VDK PAY APP
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny Sunrise Mitra. Manolotra sehatra iray izy io, ahafahan'ny olona manao dingana famerenam-bola haingana amin'ny tambazotran'ny angona fifandraisana. Izy io dia natao manokana ho an'i India. Noho izany, manolotra tobim-pamerenana ho an'ny tambajotra rehetra, izay ahitana Jio, sy Airtel.
Izy io dia manolotra ny fanatanterahana ny asa roa an'ny My Airtel sy My Jio Apps. Noho izany, amin'ny fampiasana an'io fampiharana io, ny mpampiasa dia afaka miditra mora foana ny endri-javatra rehetra amin'ireo fampiharana ireo. Ny mpampiasa dia afaka manao sarany mora amin'ireo tambajotra ireo sy ireo tambajotra hafa rehetra misy any India.
Amin'ny alalan'ity fampiharana ity, ny mpampiasa dia afaka manao recharge haingana amin'ny isa hafa. Raha misy havana na namanao mila recharge argent dia mila manoratra ny laharana ianao ary mandefa ny vola ilaina. Noho izany, mety hieritreritra ianao hoe ahoana no ahafahanao mampiakatra ny kaontinao? Raha izany ianao dia manome fomba maro hamerenana ny kaontinao VDK.
Azonao atao ny mampiasa ny carte de crédit na ny carte de crédit, manome fananan'ny banky ihany koa izy io, ary azonao atao koa ny mampiasa ny rafitra famindrana E-wallet mba hampiakatra ny kaontinao. Azonao atao ny misafidy ny fomba rehetra handoavam-bola ny kaontinao, ireo fomba ambony rehetra ireo dia mora ho an'ny rehetra.
The Wallet nomerika manolotra fonosana maimaim-poana isan-karazany isaky ny fifanakalozana na recharge. Ny tolotra dia hovana isan'andro. Noho izany, hahazo tolotra vaovao isan'andro ianao ary ny recharge tsirairay dia hanome fidirana maimaim-poana. Ny lisitry ny fonosana nohavaozina dia ho azonao.
Izy io koa dia manome rafitra fizarana mora ho an'ireo mpampiasa, izay ahafahan'izy ireo mizara ny volany amin'ny hafa. Izy io koa dia manome antoka hiarovana ny fiainanao manokana ary hitandrina ny fahadiovanao. Misy lafin-javatra marobe amin'ity rindranasa ity izay azonao zahana ao.
Raha te hampiasa an'ity rindranasa ity dia mila misoratra anarana amin'ny kaontinao ianao. Manolotra dingana tsotra amin'ny fisoratana anarana izy io. Mila misoratra anarana amin'ny alàlan'ny nomeraon-telefaona fotsiny ireo mpampiasa. Vantany vao mandefa ny nomeraonao ianao, dia hisy kaody fanamafisana halefa amin'ny nomeraon-telefaoninao. Mila manamafy izany ianao ary manomboka mampiasa azy.
anarana VDK PAY
Anaran'ny fonosana com.VDKPay
Developer Sunitra Mitra
Manome serivisy famerenana amin'ny tambajotra maro
Mora ny manatsara ny kaontinao
Fomba maro hamerenana ny kaontinao
Rafitra E-wallet namboarina
Rafitra fizarana mora
Packages mifototra isan'andro
Makà Dana Apk
Hizara rohy fampidinana aminareo rehetra izahay, saingy azo jerena ao amin'ny Google Play Store ihany koa. Manome rohy farany azo antoka sy farany amin'ity pejy ity izahay rehetra. Aza misalasala mipaipaika ny bokotra fisintomana azo atao ary miandry segondra vitsy mandra-pahatapitry ny fisintomana.
Zava-dehibe eo amin'ity fiarahamonina ity ny fifandraisana. Amin'ny alàlan'ny VDK PAY Apk dia tsy ho very io singa io na oviana na oviana. Noho izany, mitazona ny tenanao havaozina hatrany miaraka amin'ny teknolojia ary mahazoa ny rafitra famerenam-bidy tsara indrindra. Raha manana olana amin'ny fidirana ianao dia manolotra serivisy fifandraisana.
Sokajy Apps, Finance Tags Wallet nomerika, VDK PAY, VDK PAY Apk, VDK PAY App Post Fikarohana
Filmycab Apk Download Ho an'ny Android [2022 Movie App]
Play Mods TV Apk Download ho an'ny Android [2022 IPTV App]